Uddevalla waa magaala madaxda gobalka Böhuslän.waxa ay ka koban tahay 31 Qeyb ama xaafadood, Waxay u jirtaa caasimada Labaad ee Göteborg masaafo dhan 80 km, Tarenka wuxuu u socdaa 1 saac, Basaskana waxeey u socdaan 1 saac iyo 5 daqiiqo. Ayadoo ay jiraan Basas kala duwan oo saacad waliba baxa. Dhinaca waqooyi waxaa ka jira Dalka Norwey xuduuda Norwey wexey u jirtaa masaafo dhan 92 km, Oslo 197 km. Uddevalla waxaa dhex mara jidka E6 motorväg. Magaalada Uddevalla waxaa degen shacab gaaraya 57.000. Bulshad Soomaalida ee ku nool magaalada Uddevalla ayaa waxay kala deganyihiin xaafadaha ku dhadhow magaalada bartamaheeda iyo kuwo xoogaa ka fog oo ay u raacaan basas ayadoo dadka qaarkood ay ku tiriyaan magaalada Uddevalla in ay tahay magaalo u fiican caruurta,Dumarkaiyo dadka waayeelka ah in kastoo Soomaalida meel u fiican aysan jirin. Uddevalla waxa eey leedahay xeeb wanaagsan, kaluun badan iyo dekeda maraakiibta ku soo xirtaan, maraakiibta badankooda waxa ay ka yimaadaan wadamada North Amerika waana dekeda sedexaad oo ugu weyn wadankan. Xiliyada kuleylaha magaalada waa saxmad oo waa magaalo ay aad u xiiseeyaan dadka turistaha waxaana ku hareereysan jasiirado badan. Uddevalla dhexdeeda waxaa ka shaqeeya basas iyo doonyo lagu tago meelaha lagu Nasto ama lagu qubeysto waqtiyada kuleylaha. GURYAHA: Shirkada guryaha bixiya way kala duwan yihiin laakiin labo shirkadood ayay u badan yihiin soomaalida, shirkada wexeey kala yihiin mid privat ah iyo mid kommunka ah. Mida privatka ah waxaa la yiraa Bovista oo ayada wax sidaa kuma xirto oo xujo ama damiin , Laakiin shirkada kale oo la yiraa Uddevallahem waxeey kugu xujeynaysaa Yaa kaa bixinaya kirada,ma shaqeysataa mise ceyr ayaad qaadataa ? Hadii aad ceyr qaadatid waa inaad gacanhayahaaga kuu soo qoraa warqad cadeyn oo damiin ah. ( Intyg ) Hadii aad shaqeysatidna warqada mushaharkla ayaa kugu filan ( Lönespecification ). Kirada guryaha waa isku wada qeymo labada shirkad waxaana lagu helaa: 1 qol 3200-3500 kr, 2 qol 4000-4400 kr, 3 qol 5100-5600 kr, 4 qol 5500-5900 5 qol 7200-8000. Ayadoo ay xiliyadii hore ay dadku inta guri ay kiraystaan ay markiiba ka guuri kareen Laakiin hada waxaa qasab ah in aad deganaato 9 bilood ugu yaraan haddii aad ku bedelaneyso guri isla shikada ah, haddii aad ka wada guureysana waa inaad sheegtaa 3 bilood kahor (Uppsägning ) WAXBARASHADA: Waxbarashada magaaladan Uddevalla waa mid aad u heer sareysa, magaalada waxaa ku yaala hal jaamacad iyo hal komvux oo qeybo aad u badan ka sameysan, waxaa kaloo ku yaal sedex dugsi sare oo kala duwan oo waxa ay ku xiran tahay ardayga waxa uu baranaayo oo sedexda gymnasium isku wax lagama barto. SFI waxaad sugaysaa 1 ilaa 2 bilood marka aad iska diiwaan galiso xafiiska ceyrta oo isla gacanhayahaaga ayaa kuu dalbaaya oo kadib warqada balanta ah ayaa iskoolka komvuxka kuu soo diraaya, maalinta aad la kulantid waxaa laguu soo sheegayaa warbixinta iyo waqtiga aad bilaabayso iyo saacadaha aad dhiganeynso. SFI waxaa la dhigtaa sedex saac ilaa 5 saacadood , ayadoo ay jiraan qeybo A-B-C-D Xafiiska Ceyrta iyo iskoolka komvuxka wey wada xiriiraan waa dad isku xiran, bil walbana waxa eey kaa kontoroolayaa waqtiyada ama maalmaha aad goysay amam aadan tegin iskoolka, hadii aadan sabab keenin wey kaa goynayaan maalintaas wixii aad qaadan laheyd ceyrta, laakiin hadii aad xanuunsato ama caruurta kaa xanuunsadaan waxaad tusinrysaa warqada aad ku tagtay takhtarka lagaama jaraayo lacagta. Qofkii dhameeya SFI wuxuu sii baran karaa waxyaabo kale oo uu ku shaqeysanaayo mustaqbalka sida caafimaadka, Basaska, Dhismaha iyo koronto yaqaan. Qofkii aan u baahneyn wax ceyr ah, qofka Asaga ayaa iska soo diiwaan gelinaayo iskoolka komvuxka. Magaalada Uddevalla waxa ay leedahay dhaqan hore oo ah ( Skolbus ) Ardayda dhigta iskoolada caadiga iyo dadka waaweyn oo dhigta SFI (komvuxka ), waxaa qof waliba xaafadiisa ka qaadaya basas oo geynaya Iskoolada ay dhigtaan iyo komvuxka , laakiin marka laga soo rawaxo iskoolka qofka wuxuu soo raacayaa basaska magaalada ka shaqeeya xaafadaha qaarkood waa in aad ku bedelataa labo bas sida xaafada Dalaberg iyo Skogslyckan oo ay Soomaalida u badan yihin. Xaafada Dalaberg qeyb ka mid ah waxaa gudoomiye ka ah nin Somaali wuxuuna xildhibaan ka yahay degmada waana nin aad u caawiyo Soomaalida oo dhan. SHAQADA / PRAKTIGA: Magaalada xaga shaqada waxaa lagu Tilmaamaa magaalooyinka ugu wanaagsan sababta oo ah qofkii raba inuu shaqeysto afkana yaqaana oo dadaala ma weynaayo shaqo, ayadoo xitaa xirfadaada Aqoonta ay ku xeran tahay mararka qaarkood, Basaska ka shaqeeya magaalada waxaa darawal ka ah ajnabi 80%. Praktiga waxaa leysu diraa wixii aad codsato hadii la waayana waxaa u badan sida skoolada, meelaha waayeelada iyo dukaamada qaarkood sida Bouhause iyo Jula, Uddevalla waxa ku taal warshada baaburta ee Volvo qeybta C 70 ayaa lagu sameeyaa. Dumarka Soomaalida badanaaba wey wada shaqeeyaan oo waxaa jirta in xitaa qof waliba lagu shaqaaleynaayo caruurtiisa inta u dhexeysa 1 sano ilaa 12 jir, Laakiin leysma arko oo qof waliba waa mashquul Waxbarasho,Shaqo iyo qaar hooyooyin caruur yayryar guryaha ku haysta. NOLOSHA: Uddevalla marka uu qofka helo sharci degenaansho ah oo uu soo dego magaaladan waxaa la siinayaa mudo labo sano ah sida: Hadii uu qof adress uu ku noqdo 4600 kr bishiiba, Hadii uu guri qaatana 7400 kr, Maceshada weey jaban tahay, waxaa ku yaalo dukaamo faro badan wexeyna leedahay Suuq aad u weyn oo la yiraa Torp Köpcenter, mar dhowna waxaa laga dhisayaa IKEA, Uddevalla waxaa Adeeg u yimaada dadka Norwegianka ,Waxaa ku yaal dukaamo Islaami ah, Soomaalida degen waxaa lagu qayaasaa 200 ilaa 250, Jaaliyad Soomaali wey leeyihiin, Masaajid weyn kuma yaal Laakiin waxaa ku yaal meel weyn oo loo sameeyey sida masaajid oo aad u qurux badan gudihiisa. Magaalada waxa kale oo ay leedahay dugsi quraan oo carabta iyo Somalida Caruur iyo dad waaweyn intaba. SOCDAALKA IYO GAADIIDKA: Uddevalla waxaa ka baxa Basas aad u badan oo wadan gudihiisa iyo dibediisaba. Wadanka dibediisa waxaa ka baxa sida : Berlin-Jarmalka, Kopenhagen-Denmark, Oslo-Norwey, Warsawa-Poland. Tareenada waxaa loo raacaa sida Stockholm X2000, Göteborg Express, Herrljunga, Borås, Strömstad iyo Vänersborg. Basaska aad ayay u badanyihiin kuwa taga Magaalooyinka,Tuulooyinka, jasiiradaha iyo kuwa ka dhex shaqeeya magaalada gudaheeda intaba. Basaska ka shaqeeya magaalada waxaa darawal ka ah 60% Ajnabi . Magaalada kuma badna dad baaskiil wata badankooda baabuur ayay wataan oo magaalada ma aha dhul siman. Kaarka basaska magaalada lagu raaco oo bishiiba qeymahooda waa: qofka weyn 340 kr, wixii ka yar da,da 22 jir waa 275 kr. Waxaa soo Diyaariey: Abshir Cabdi Macow. Warbixintani waa mid ka mid ah barnaamijkii aan ugu tala galnay in aan kaga warano nolosha kamuunada Sweden. Adiguna waxaad noo soo diri kartaa warbixin ku saabsan nolosha kamuunka aad ku nooshahay.
Uddevalla waa magaala madaxda gobalka Böhuslän.waxa ay ka koban tahay 31 Qeyb ama xaafadood, Waxay u jirtaa caasimada Labaad ee Göteborg masaafo dhan 80 km, Tarenka wuxuu u socdaa 1 saac, Basaskana waxeey u socdaan 1 saac iyo 5 daqiiqo. Ayadoo ay jiraan Basas kala duwan oo saacad waliba baxa. Dhinaca waqooyi waxaa ka jira Dalka Norwey xuduuda Norwey wexey u jirtaa masaafo dhan 92 km, Oslo 197 km. Uddevalla waxaa dhex mara jidka E6 motorväg.
Magaalada Uddevalla waxaa degen shacab gaaraya 57.000.
Bulshad Soomaalida ee ku nool magaalada Uddevalla ayaa waxay kala deganyihiin xaafadaha ku dhadhow magaalada bartamaheeda iyo kuwo xoogaa ka fog oo ay u raacaan basas ayadoo dadka qaarkood ay ku tiriyaan magaalada Uddevalla in ay tahay magaalo u fiican caruurta,Dumarkaiyo dadka waayeelka ah in kastoo Soomaalida meel u fiican aysan jirin.
Uddevalla waxa eey leedahay xeeb wanaagsan, kaluun badan iyo dekeda maraakiibta ku soo xirtaan, maraakiibta badankooda waxa ay ka yimaadaan wadamada North Amerika waana dekeda sedexaad oo ugu weyn wadankan. Xiliyada kuleylaha magaalada waa saxmad oo waa magaalo ay aad u xiiseeyaan dadka turistaha waxaana ku hareereysan jasiirado badan.
Uddevalla dhexdeeda waxaa ka shaqeeya basas iyo doonyo lagu tago meelaha lagu Nasto ama lagu qubeysto waqtiyada kuleylaha.
GURYAHA: Shirkada guryaha bixiya way kala duwan yihiin laakiin labo shirkadood ayay u badan yihiin soomaalida, shirkada wexeey kala yihiin mid privat ah iyo mid kommunka ah.
Mida privatka ah waxaa la yiraa Bovista oo ayada wax sidaa kuma xirto oo xujo ama damiin , Laakiin shirkada kale oo la yiraa Uddevallahem waxeey kugu xujeynaysaa Yaa kaa bixinaya kirada,ma shaqeysataa mise ceyr ayaad qaadataa ? Hadii aad ceyr qaadatid waa inaad gacanhayahaaga kuu soo qoraa warqad cadeyn oo damiin ah. ( Intyg ) Hadii aad shaqeysatidna warqada mushaharkla ayaa kugu filan ( Lönespecification ).
Kirada guryaha waa isku wada qeymo labada shirkad waxaana lagu helaa: 1 qol 3200-3500 kr, 2 qol 4000-4400 kr, 3 qol 5100-5600 kr, 4 qol 5500-5900 5 qol 7200-8000.
Ayadoo ay xiliyadii hore ay dadku inta guri ay kiraystaan ay markiiba ka guuri kareen Laakiin hada waxaa qasab ah in aad deganaato 9 bilood ugu yaraan haddii aad ku bedelaneyso guri isla shikada ah, haddii aad ka wada guureysana waa inaad sheegtaa 3 bilood kahor (Uppsägning )
WAXBARASHADA: Waxbarashada magaaladan Uddevalla waa mid aad u heer sareysa, magaalada waxaa ku yaala hal jaamacad iyo hal komvux oo qeybo aad u badan ka sameysan, waxaa kaloo ku yaal sedex dugsi sare oo kala duwan oo waxa ay ku xiran tahay ardayga waxa uu baranaayo oo sedexda gymnasium isku wax lagama barto.
SFI waxaad sugaysaa 1 ilaa 2 bilood marka aad iska diiwaan galiso xafiiska ceyrta oo isla gacanhayahaaga ayaa kuu dalbaaya oo kadib warqada balanta ah ayaa iskoolka komvuxka kuu soo diraaya, maalinta aad la kulantid waxaa laguu soo sheegayaa warbixinta iyo waqtiga aad bilaabayso iyo saacadaha aad dhiganeynso.
SFI waxaa la dhigtaa sedex saac ilaa 5 saacadood , ayadoo ay jiraan qeybo A-B-C-D
Xafiiska Ceyrta iyo iskoolka komvuxka wey wada xiriiraan waa dad isku xiran, bil walbana waxa eey kaa kontoroolayaa waqtiyada ama maalmaha aad goysay amam aadan tegin iskoolka, hadii aadan sabab keenin wey kaa goynayaan maalintaas wixii aad qaadan laheyd ceyrta, laakiin hadii aad xanuunsato ama caruurta kaa xanuunsadaan waxaad tusinrysaa warqada aad ku tagtay takhtarka lagaama jaraayo lacagta. Qofkii dhameeya SFI wuxuu sii baran karaa waxyaabo kale oo uu ku shaqeysanaayo mustaqbalka sida caafimaadka, Basaska, Dhismaha iyo koronto yaqaan.
Qofkii aan u baahneyn wax ceyr ah, qofka Asaga ayaa iska soo diiwaan gelinaayo iskoolka komvuxka.
Magaalada Uddevalla waxa ay leedahay dhaqan hore oo ah ( Skolbus ) Ardayda dhigta iskoolada caadiga iyo dadka waaweyn oo dhigta SFI (komvuxka ), waxaa qof waliba xaafadiisa ka qaadaya basas oo geynaya Iskoolada ay dhigtaan iyo komvuxka , laakiin marka laga soo rawaxo iskoolka qofka wuxuu soo raacayaa basaska magaalada ka shaqeeya xaafadaha qaarkood waa in aad ku bedelataa labo bas sida xaafada Dalaberg iyo Skogslyckan oo ay Soomaalida u badan yihin. Xaafada Dalaberg qeyb ka mid ah waxaa gudoomiye ka ah nin Somaali wuxuuna xildhibaan ka yahay degmada waana nin aad u caawiyo Soomaalida oo dhan.
SHAQADA / PRAKTIGA: Magaalada xaga shaqada waxaa lagu Tilmaamaa magaalooyinka ugu wanaagsan sababta oo ah qofkii raba inuu shaqeysto afkana yaqaana oo dadaala ma weynaayo shaqo, ayadoo xitaa xirfadaada Aqoonta ay ku xeran tahay mararka qaarkood, Basaska ka shaqeeya magaalada waxaa darawal ka ah ajnabi 80%. Praktiga waxaa leysu diraa wixii aad codsato hadii la waayana waxaa u badan sida skoolada, meelaha waayeelada iyo dukaamada qaarkood sida Bouhause iyo Jula, Uddevalla waxa ku taal warshada baaburta ee Volvo qeybta C 70 ayaa lagu sameeyaa.
Dumarka Soomaalida badanaaba wey wada shaqeeyaan oo waxaa jirta in xitaa qof waliba lagu shaqaaleynaayo caruurtiisa inta u dhexeysa 1 sano ilaa 12 jir, Laakiin leysma arko oo qof waliba waa mashquul Waxbarasho,Shaqo iyo qaar hooyooyin caruur yayryar guryaha ku haysta.
NOLOSHA: Uddevalla marka uu qofka helo sharci degenaansho ah oo uu soo dego magaaladan waxaa la siinayaa mudo labo sano ah sida: Hadii uu qof adress uu ku noqdo 4600 kr bishiiba, Hadii uu guri qaatana 7400 kr, Maceshada weey jaban tahay, waxaa ku yaalo dukaamo faro badan wexeyna leedahay Suuq aad u weyn oo la yiraa Torp Köpcenter, mar dhowna waxaa laga dhisayaa IKEA, Uddevalla waxaa Adeeg u yimaada dadka Norwegianka ,Waxaa ku yaal dukaamo Islaami ah, Soomaalida degen waxaa lagu qayaasaa 200 ilaa 250, Jaaliyad Soomaali wey leeyihiin, Masaajid weyn kuma yaal Laakiin waxaa ku yaal meel weyn oo loo sameeyey sida masaajid oo aad u qurux badan gudihiisa. Magaalada waxa kale oo ay leedahay dugsi quraan oo carabta iyo Somalida Caruur iyo dad waaweyn intaba.
SOCDAALKA IYO GAADIIDKA: Uddevalla waxaa ka baxa Basas aad u badan oo wadan gudihiisa iyo dibediisaba. Wadanka dibediisa waxaa ka baxa sida : Berlin-Jarmalka, Kopenhagen-Denmark, Oslo-Norwey, Warsawa-Poland.
Tareenada waxaa loo raacaa sida Stockholm X2000, Göteborg Express, Herrljunga, Borås, Strömstad iyo Vänersborg. Basaska aad ayay u badanyihiin kuwa taga Magaalooyinka,Tuulooyinka, jasiiradaha iyo kuwa ka dhex shaqeeya magaalada gudaheeda intaba. Basaska ka shaqeeya magaalada waxaa darawal ka ah 60% Ajnabi . Magaalada kuma badna dad baaskiil wata badankooda baabuur ayay wataan oo magaalada ma aha dhul siman.
Kaarka basaska magaalada lagu raaco oo bishiiba qeymahooda waa: qofka weyn 340 kr, wixii ka yar da,da 22 jir waa 275 kr.
Waxaa soo Diyaariey: Abshir Cabdi Macow.
Cunsuriyiin fara badan oo weeraray masaajidka Stockholm